The MYAWADY Daily: March 2017
မြ၀တီရသစုံမဂ္ဂဇင်း အတွဲ(၆၅) အမှတ်(၆)
( ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဧပြီလထုတ် )
MyawadyMagazine(4-2017) by TheMyawadyDaily on Scribd
ငွေတာရီမဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၆၈၁)
NgweThaYeMagazine(4-2017) by TheMyawadyDaily on Scribd
မန္တလေးမြို့ မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးစွဲမှု၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများဖြစ်ပြီး ဒေတာသုံးစွဲမှုမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများ၏ သုံးစွဲမှုထက် ပိုများနေ
မန္တလေး ၊ ၃၁-၃-၂၀၁၇
မန္တလေးမြို့ အတိုင်းအတာအရ မိုဘိုင်းဖုန်း သုံးစွဲမှုတွင် ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းသည် စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူများ ဖြစ်နေပြီး လူတစ်ဦးချင်း ဒေတာ အသုံးပြုမှုသည် တစ်လလျှင် 1.5 GB ခန့်ထိရှိနေရာ ၄င်း ပမာဏသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံ များ၏ သုံးစွဲမှုထက် ပိုများနေသည်ဟု အရှေ့မြောက် ဒေသ စီးပွားရေးတာဝန်ခံ Arindam Sengupta (တယ်လီနော) က ဆိုသည်။
မန္တလေးတစ်မြို့လုံး အတိုင်းအတာအရ မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် ဒေတာ အသုံးပြုမှုသည် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ တို့ထက်ပင် ပိုမိုများပြား နေကြောင်း ၄င်းက ပြောပြသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ တို့တွင် အင်တာနက် ဆက်ကြောင်းများ တည်ဆောက်ရာတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရ သော်လည်း မန္တလေးမြို့တွင် ဆက်ကြောင်းများ တည်ဆောက်ရာတွင် အချိန်တိုအတွင်း
ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ သည်ဟု Arindam Sengupta ကဆိုသည်။
''မန္တလေးမှာရှိတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းက တစ်ဆင့် ဒေတာ အသုံးပြုမှုဟာ ခြောက်လကြာတိုင်း ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာနေပါတယ်'' ဟု Arindam Sengupta က ပြောပြသည်။
ဒေတာအသုံးပြုမှုတွင် လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများ အသုံးပြုခြင်း၊ ဗီဒီယိုဖိုင်များ ကြည့်ရှုခြင်း၊ တေးဂီတဖိုင်များ ကြည့်ရှုခြင်း၊ You Tube အသုံးပြုခြင်း စသည်ဖြင့် စုံလင် စွာသုံးစွဲကြပြီး စုစုပေါင်း စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲမှု ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း သည် ဒေတာ သုံးစွဲလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဒေတာဖြင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း သည် ဖုန်းလိုင်းမှ ခေါ်ဆိုခြင်းထက် ငွေကြေး ကုန်ကျမှု သက်သာခြင်းကြောင့် ဒေတာကို အသုံးပြု၍ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှာလည်း မြင့်မားလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွင်း လူဦးရေ ၁ဝဝဝ လျှင် တယ်လီဖုန်း ၁၅၂ လုံး သုံးစွဲနိုင်ရန် ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍမှ ရည်မှန်းခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် လူဦးရေ ၁ဝဝဝ ၏ တယ်လီဖုန်း သုံးစွဲနိုင်မှု အခြေအနေမှာ ၅၄၆ ဦးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အမျိုးသား စီမံကိန်း နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာများတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။ ထိုသို့ တိုးတက်မှုများ ဖြစ်လာရခြင်းမှာ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအပြင် ပုဂ္ဂလိက အော်ပရေတာ များဖြစ်သည့် တယ်လီနော၊ အော်ရီဒူးတို့ ပါဝင်လာခြင်း ကြောင့်ဖြစ်ပြီး တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ပြည်နယ်များတွင် အစဉ် တိုးချဲ့တပ်ဆင် ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အသုံးပြုသူ များဖြစ်နေပြီး ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် ဒေတာ သုံးစွဲသူများ ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် လေးလခန့်မှစ၍ ဒေတာ အသုံးပြုမှုနှုန်းမှာ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်လာနေပြီး သုံးစွဲမှု အနေအထား များအရ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် တယ်လီနောမှ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် တာဝါတိုင်ပေါင်း တစ်သောင်းခန့် တိုးချဲ့သွားမည် ဟု သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေတာသုံးစွဲမှု မြင့်မား လာခြင်းကြောင့် ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ များက အင်တာနက် နှုန်းမြန်ဆန် ကောင်းမွန်ရေးကို အလေးထား လုပ်ဆောင် လာကြသည်ဟု သိရသည်။
Posted by myawady at 9:37 AM No comments:
3132017 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 8:05 AM No comments:
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၆) အမှတ်(၁၃)
SportsView(6-13) by TheMyawadyDaily on Scribd
အကျေ ၊ အလွန် သင်တန်းဆင်း မြို တိုင်းရင်းသားများ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း သင်ယူတတ်မြောက်
အကျေ ၊ အလွန် သင်တန်းဆင်းပွဲတွင် သင်တန်းသား ၊ သင်တန်းသူများအတွက်
ဂုဏ်ပြုဆုနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်စဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ ဝါးနက်ရုံကျေးရွာ ရှိ မြိုတိုင်းရင်းသားများ မြန်မာစာ တတ်မြောက်ရေး အတွက် အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် ကွပ်ကဲမှုအောက် တပ်မတော်ပညာရေး ကျောင်းများမှ နည်းပြများဖြင့် အကျေ၊ အလွန် သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခဲ့ရာ သင်ယူတတ်မြောက်မှု ၇ဝ ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၆၃ စု၊ လူဦးရေ ၃၄၄ ဦးရှိသည့်အနက် မြန်မာစာ မတတ်မြောက်သူ မြိုတိုင်းရင်းသား ၄၃ ဦးကို ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်မှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ မတ် ၃ ရက်အထိ မြန်မာစာဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်ပါ အခန်း (၁/၂)ဖတ်ခြင်း၊ ရေးခြင်း၊ သင်္ချာဘာသာရပ် သင်ရိုးညွှန်းတမ်း စာအုပ်ပါ အခန်း(၁/၂) ကိန်းဂဏန်း သင်္ကေတများရေးခြင်း၊ ရွတ်ဆိုခြင်း စသည့် သင်ခန်းစာများကို အဆိုပါကျေးရွာ အခြေခံပညာ မူလတန်းကျောင်း ၌ သင်ကြား ပို့ချပေးခဲ့သည်။
သင်တန်းဆင်းပွဲကို အဆိုပါကျောင်း၌ပင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူများအား ဂုဏ်ပြုဆုများ၊ စာရေးကိရိယာများနှင့် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
Posted by myawady at 10:45 AM No comments:
Extend agriculture and livestock breeding production to help fulfil people’s food requirement
Senior General Min Aung Hlaing views raising of layers at agriculture and
livestock breeding camp (Sawbwagyigon)of Yangon Command.
By extending agriculture and livestock breeding production with the conviction that the Tatmadaw must be in the service of the country and the people, it should help fulfil the public food requirement. The people of Yangon must be taken into consideration apart from the officers, other ranks and families of the command, said Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing during his inspection of the No.1 Agriculture and Livestock Breeding Camp (Sawbwagyigon) of Yangon Command.
The Senior General accompanied by Deputy Commander- in-Chief of Defence Services Commander-in-Chief (Army) Vice-Senior General Soe Win, Commander-in- Chief (Navy) Admiral Tin Aung San, Commander-in- Chief (Air) General Khin Aung Myint, senior military officers of the Office of the Commander-in-Chief (Army), the commander of Yangon Command and officials visited the camp yesterday morning.
At the brief ing hall, the command commander explained the raising of Novogen Brown layers and broilers under modern airconditioning system, DYL pig farming, dairy cow breeding, systematic surface layer, middle layer and bottom layer species-wise fish farming, Ngwehnin mushroom and banana cultivation, year-round seasonal crop cultivation in Greenhouse, distribution of meat, fish and vegetables of the camp to officers, other ranks and families of the command at reasonable prices, selling of the produce to the people at Taing Shwegon Shop No.1 in Sawbwagyigon and Taing Shwegon Shop No.2 in Baukhtaw at reasonable prices.
In response to the report, the Senior General said that in engaging in agriculture and livestock, it is necessary to transform from test-run cultivation toamass cultivation and production system. Priority must be given to growing crop items which are popular among the consumers such as okra, radish, cabbage and green chilli and their production must be boosted. As land space is so valuable, no space should be left in cultivating crops and vegetables. Growing crops layer by layer in greenhouses based on the type of crop item will save land space and use of water. The cultivation of such vegetables as drumsticks and bananas should also be considered. The military headquarters need to grow windbreaks to maintain sound climate and prevent natural disaster. In running the military-owned agricultural and livestock farms, profit-seeking is not important and it must mainly target the 100 percent consumption needs of Tatmadawmen and their families, the needs for retired Tatmadawmen and pensioners, sale of products for the local people at cheaper rates and the welfare of students, civil servants and ordinary people.
Then, the Senior General and party viewed raising of Novogen Brown layers with the modern air-conditioning system at the agriculture and livestock breeding camp. A total of 10,000 Novogen Brown layers are being bred at the camp, and they lay 95 percent of eggs during the four-week laying period.
Next, the Senior General and officials were conducted round by officials at thriving of Chinese kale, mustard and cauliflower plantations in the green houses.
The agriculture and livestock breeding camps from Yangon Command produced more than 760,000 chickens, 595 piglets, 1,490,247 viss of chicken, 201,884 viss of pork, 4,735 viss of mutton, 27,308 viss of beef, 9,612 viss of duck, 451,220 viss of fish, 1,125,870 duck eggs, 22,026,824 hen eggs and 138,921 viss of milk from January 2016 to February 2017. These products were supplied as wet ration to respective regiments and units sold to families of military units and people at fair prices.
Senior General Min Aung Hlaing views progress of building Thiri Mingala Maha Sasana Beikman
Senior General Min Aung Hlaing gives instructions to officials on construction of Thiri Mingala Maha Sasana Beikman.
Photo shows front elevation and left side elevation of Thiri Mingala Maha Sasana Beikman.
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing, accompanied by Deputy Commander-in-Chief of Defence Services Commander- in-Chief (Army) Vice- Senior General Soe Win, Commander-in-Chief (Navy) Admiral Tin Aung San, Commander-in-Chief (Air) General Khin Aung Myint, senior military officers of the Office of the Commander-in- Chief (Army), the commander of Yangon Command and officials, this afternoon viewed construction of Thiri Mingala Maha Sasana Beikman with the donations of families of Tatmadaw (Army, Navy and Air) and well-wishers in the precinct of Lawka Chantha Abhaya Labha Muni Buddha Image on Mindhamma Hill in Insein Township.
At the briefing hall, an official reported on progress in construction of the Sasana Beikman. The Senior General instructed officials to systematically grow fl owery plants, shade trees and windbreaks for cleaning and beautifying the environment, carry out construction of the car park, public toilets, ensuring proper flow of water and drainage system in coordination with the Pagoda Board of Trustees and complete all construction tasks decorated with Myanmar handicrafts on schedule.
Afterwards, the Senior General and party together with members of the Pagoda Board of Trustees viewed progress of earthworks. The stake-driving ceremony of the Thiri Mingala Maha Sasana Beikman took place there on9March. It will bea186 feet by 72 feet two-storey Beikman. Upon completion of construction, the Sasana Beikman will beavenue to hold the religious examinations for members of the Sangha and religious ceremonies in Yangon North District.
3032017 YadanarponDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
3032017 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
Knowledgelight(Issue 13) by TheMyawadyDaily on Scribd
Labels: Knowledge Light, သုတအလင်း
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၀) အမှတ်(၃၈)
AuroraJournal(20-38) by TheMyawadyDaily on Scribd
Inlay Lake to get new floating market
Fruit and vegetables being sold at the floating market.
Inlay March 29
A new floating market will be built in Myanmar’s famous Inlay Lake in Shan State in May as the existing floating market in Heyar Village gradually turns into the land, said sources from
One reason Shan State attracts international touristis due to world-famous Inlay Lake with floating islands and the custom and tradition of Inn ethnics. Therefore, the authorities are taking systematic measures for the conservation and beautifying of the grand lake. The existing floating market has seen such changes since 2000, so the plan has started to openanew market to catch greater attraction of local and international visitors.
Out of the 20 floating villages, Inpawkhon Village and Nanpanpaukpar Village which still have 70 to 80 per cent floating homes have been tentatively selected foranew market where textile, silverware and local products will be sold.
A coordination meeting also took place to discuss the conservation of Inlay Lake, protection of watershed areas, biodiversity and wood plantations, improvement of socio-economy of the local people and systematic sharing of funds. The meeting was held at the office of the Shan State government on 18 March. It was also attended by Union Minister for Hotels and Tourism U Ohn Maung.
The union minister also heldameeting on 19 March with civil society organizations and non-governmental organizations to discuss the conservation and maintenance of the Inlay Lake.